Isai mureza | Apg29
Isai inobva encryption, digitaalinen zvitupa uye digitaalinen vakasaina (unoenderana vakasaina nguva kadhi kutenga).
Isai kunoda vamwe Software kuiswa mune makombiyuta. Kana mutengi akazadza zvavo digitaalinen kunotenga mudengu uye sarudza "mari ne makadhi" Zvinotoda siyana kukurukurirana. Zvitupa vanotumirwa neshure, rimwe hunyambiri mirairo-digital mari vakasikwa uye akapiwa kudzora kubhengi anoitwa. Nokuti encryption kiyi dzinomuka ari Supermarket saka pane zvinonzi mudzi kiyi vose vanoshandisa uye inovakwa kupinda software.
Isai munhu chirongwa uye pasi pose mureza kubhadhara chakachengeteka vane makadhi paIndaneti. Hazvina kunyanya pamusoro zvemagetsi zvokutengeserana uye kubhadhara mabhiri. Chirongwa chakatangwa pakati pezana 90s. The Acronym rinomirira Akachengeteka Electronic kutengeserana dziri Swedish yakachengeteka zvemagetsi mutengapwe. Shure pakasikwa mureza vaiva guru makambani akadai Visa, Mastercard, IBM, Microsoft uye Netscape. Kwakati mutyairi chirongwa chikamu kubva Sweden mamwe mabhanga makuru uye Postal Giro.
Isai inobva encryption, digitaalinen zvitupa uye digitaalinen vakasaina (unoenderana vakasaina nguva kadhi kutenga). Technical Data akasika Yaunoti ( "chakagadzirwa") makadhi rakapotsa kusanganisira kushandiswa digitaalinen chitupa uye ane encrypted kadhi nhamba anotumwa. Ndicho nemabhengi chakasimba verisign uyo kudzora uye nyaya certificate kune vose kadhi vanoshandisa nemabhizimisi. Verisign ari subcontractor kuti dzinoratidza. Mushambadzi zvitupa siyana zvinogona kufananidzwa muripo chitambi nayo kare kushandiswa apo achiita yaanobhadhara echikwereti kutengwa.
Cyber ​​Cash yakabatsira kutanga Isai uye anewo zvakafanana ezvinhu inonzi SIPS. Isai uye CyberCash anoshandisa imwe mhando encryption. Verifone nderimwe makambani pedyo kushandisa Isai mureza, uye kuti panguva akaedzwa. With yakatarwa uye zvakafanana hurongwa, haugoni kushandisa mari pakati vanhu, sezvo nyika vanoedza kudzivisa mari laundering uye zvakafanana. Sezvazvinoita nezvakawanda mumwe cashless aizoshandisa Isai kwete vachibhadhara duku nokuti mukuru utariri mari.
Computers nemakambani kombiyuta - electronic nyika rezvemari muzongoza
Yakanga iri '50s sezvo mabhanga zvishoma nezvishoma vakatanga kushandisa makombiyuta uye foni michina pakuvhiya dzavo. Vamwe vakafunga kunyange panguva iyoyo iri cashless hurongwa yapararira mhiri United States vaizonzwirwa chokuita kuti ani. Vakadana ramangwana mamiriro EFTS (Electronic Kwayo Transfer System). Asi kwakanga panguva '60s sezvo zviitiko chokuita makombiyuta zvakatanga zvakanaka. Raiva kubhengi pakati mamaneja vurmade kusimba computerization ainge Danho rino. Mumwe aiva John Reed pa Citibank (akazova sachigaro bhodhi ikoko) uyo akaita bazi yose yakatanga zvoga.
Izvi computerization nechido pakati nepakati mamaneja havana chete muUnited States. Kunyange Spain, akashanda navo chinhu rinonzi COAS (Commission Operations uye kushandisa michina). Mumwe chaizvo kare miedzo muUnited States yose pakarepo kubhadhara kwakabatana rudzi ID kadhi yakaitwa muna 1967 muna Wilmington inotungamirwa Bank of Delaware. Yaiva IBM pakutanga akazogadzira magnetremsetekniken achitaura yakatsanangurwa se "chipo kubva IT nyika kuti nyika rwezvemabhengi."
In Sweden mari Promotion yokutungamirira pachake Sven G Svensson mangwanani murevereri nokuda computerization pakati mari mabhanga. Kare 50th remakore rakaitirwa Misangano wepagore muna Saltsjöbaden kwakabatana rwezvemabhengi computerization. 90s aiva gumi kana Internet apinda zvebhizimisi. Companies kazhinji zvakatanga zvimwe zvinhu asi pakupedzisira kuva huru kambani kombiyuta. Aya ipapo kazhinji akabatanidza mu hombe yemakambani hofori.
Burroughs aiva kambani kombiyuta kudaro guru, pamwe Kumikidzo rwezvemabhengi nyika. Hayes akavaka kusanganisira KURUMIDZAI. Uyu yemarudzi marongedzero kutaurirana pakati pemahombekombe. A yapfuura guru akazvimirira makambani vaiva Sperry. Burroughs mukuru Michael Blumenthal, akabudirira 1986 kubatanidza Burroughs uye Sperry kuna Unisys. Blumenthal akanga kare makanga rezvemari.
Chimwe chinokosha munhoroondo nemakambani ari iyi, Remington Rand. Unisys mabhizimisi akaita painyanya, Inter Alia kuti arambe basa musi KURUMIDZAI uye kutarisira guru hurongwa RFID-tagged midziyo nekuda muchiuto achimiririra. RFID ari zvemichina kuti transmits shomanana mashoko uchishandisa redhiyo mafungu. Sezvatichaona, kubudikidza Mamwe bhuku iri kuti maererano RFID zhinji kubatana kusvika cashless nzanga. Microsoft kwakaita kushanda maitiro rinoshandiswa ATMs kare kutaurwa. The Linux kushanda Hurongwa yavewo kushandiswa izvi, vazhinji Internet servers uye hombe hurongwa kombiyuta supercomputers.
Mumwe muenzaniso kambani, muFinland neSweden kushingaira IT kambani Tieto pakati pezvimwe zvinhu syssIar kubudikidza kadhi issuance panguva vakawanda mabhanga. Facebook aenda muripo indasitiri zvakakomba. Kambani yakatanga rakapotsa (pachena kana kunyange chakagadzirwa) mari muna 2011 uye kombiyuta mutambo Makambani
Hung Achangobva. Facebook zvakare aronga vanoshandisa mamiriyoni 500 aizokwanisa kubhadhara nokuda kadhi Via chatappen Mutumwa. Muchishandisa Chat Software nzira kuti imi "hurukuro chinyorwa." It anotuma mitongo pakati pavo zvishoma nezvishoma (ona nehurukuro parunhare) kusiyana e-mail uye kugara tsamba.
Facebook kwakawedzerwawo sechekushandisa fraudsters, akadai kutanga Ica -like divi kuburikidza izvo mune zvimwe zviitiko kubirwa vanhu zviuru kronor kubudikidza vaipomerwa purofiti ari makwikwi. Izvi zvinogona kuitwa nekunhonga mashoko pamusoro mabhokisi bhengi. Company Apple anovaka guru Database kuti kadhi Data kuti vatengi vane makadhi. The makambani kombiyuta uchida cashless nzanga pamwe nokuti kunofambidzana chaizvo kuti zvigadzirwa zvavo. The zvakawanda cashless zvikuru makombiyuta.
Sezvo zvichida muverengi wafungidzira nokuda mutauro, hapana-makore 20 uyo akanyora bhuku rino. Akashanda makombiyuta nenzira imwe kana mumwe kwemakore wandei. Zvisinei, kuti kare ndiri handidi, kududzwa nokuda voga zvikonzero. A kwatangwa kuzviitira iaktagelse. Zvaizoda hwose, uye kunyora kusvika hafu bhuku rino ndinoda asati asvika mhiri rimwe kusafarira kurutivi cashless nzanga kubva kombiyuta bhizimisi kunhivi. Asi zviri pamusoro chinhu chakaitika anenge 50 apfuura. Yanhasi kombiyuta hazvirevi sokuti vakaratidza pfungwa uye ndaona kuti akaipa ari cashless nzanga.
Kunze iri pamusoro murume anonzi Paul Armer kubva Rand Corporation, uye kare mukupera 60 dzakakwirira-Profile oga nyaya kumativi cashless kubhadhara. Akataura izvi muna US Seneti. Tinofanira varume vakadaro nevakadzi kombiyuta munyika nhasi. Pane Ichokwadi kutsoropodza vaimbova bhengi vanhu. Asi apo iri uchitsoropodzwa kubva kombiyuta nyika? Armer vaiti kunyange kubvisa zita kubva zvinyorwa anoita kuti kusvika pamwero anogona kuziva vanhu.
In basa rake vaida Armer panguva, ari mashoko pamusoro mubayiro iri kombiyuta indasitiri. Izvi hazvina kuti akaita bhizimisi pamusoro punchi makadhi kuti chitoro Data mune akatanga akafunga kusazivikanwa nzira. The date yaisanganisira chete kuti muhoro, dzidzo uye kwakakomba enzvimbo aparadzane munzvimbo nhatu. Apo Paul Armer akabva arongwe zvinhu zviri muhurongwa, aigona pakarepo (izvo haana chinangwa kubva pakutanga) kuona kuti ndiani akanga pamusoro akanga zvepamusoro mari. Izvi kwaiva kutanga pakuzvipira kwake kuna kukurukurwa oga maringe remangwana kuvimbika dhefisiti maererano cashless kubhadhara.
Zvichida anokosha kubatana pakati kontantlöshet uye makombiyuta ndechokuti ivo cashless anonzi e-mari, asi kuti kuchengetwerwa prepaid makadhi chiri kuchengetwerwa kombiyuta servers muchimiro dzinonzi Network mari. Kana iwe funga makombiyuta sei kuchengeteka, saka pamwe pachinzvimbo zvaizova nani kumisa kuparadzirwa BoyzMikaro keji.
Nokuti vaya chete vane mumwe kufarira makombiyuta, I yemutemberi kwete kutenga kombiyuta. Musatenga kombiyuta nokuti zvingava zvakanaka kuti dzimwe nguva. Unogona kurarama pasina. Ndiko ichocho sezvo asina kutenga motokari kuti zvinenge chete amire garaji. Nekuti makambani kombiyuta vanosimbirira vachiwedzera ne kuedza foist pamusoro pedu kontantlöshet uye Big Brother saka havangagamuchiri kutengesa sezvo makombiyuta zvikuru sezvo vachida. Uyewo kubatsira chaizvo uye kunonakidza chinhu chokuita kombiyuta. Chikonzero chikuru nei Ndichiri batisisa pamakombiyuta ndiko kunyora mabhuku aya. The kombiyuta wakanaka sezvo mumaraibhurari, tapureta uye yakachena toyi.
Asi ndichava akatendeseka, kufarira kwangu makombiyuta akafa zvishoma mumwe uye nguva dzose zvandanyora mubhuku rino. Chimwe chinhu ndechokuti vamwe. Kana nhamba cashless nzanga pamusoro pedu, pane chinhu chimwe chete kuti varumbidze. Total uye mukuru Michina boycott. Kwete kuva chinhu chine hushållsabetet kuita asi zvimwe zvose kuti ane kukurukura uye anodzidzisa ushande. Inguva zano akatendeseka kubva munyori uyo zvechokwadi vanoda rwokugadzira. In Nemuromo, imwe zvakakwana guru haasaruri Michina boycott kubaya kontantlösheten. Haikwanise kurarama pasina rwokugadzira. Cash anogona kubata pasina magetsi uye technology (kunze panyaya mukugadzira). Ivo vakaita saizvozvo kwemazana emakore anoverengeka.
Kunyange Ndinoda kuramba kushandisa kombiyuta saka hazvirevi kuti kanoverengeka I fantasized pamusoro yokuti kungoita vanoguma makombiyuta. Akanetseka upenyu hwaizova uye kuita pasina. Munharaunda monitors uye Kudzorwa vagari vakawanda kubudikidza makombiyuta. Zvinoita sokuti hapana mugumo kusvikira nhamo. Saka zvakadaro, unogona kuwana zvishoma zvinhu, uye sezvo anongofunga zvaunoita pakombiyuta yako.
Kana cashless vanobatsirikana zvakazara kuratidza yakanyangara chiso chayo, pamwe pandichazofunga dai ndakanga bhora ari urongwa zvachose chakakomba munzvimbo kuti makombiyuta somumwe dzangu zvido. Zvimwe zvinofanira kunge zviri ngwizhingwi nemumiriri panzvimbo yakanga yaputswa mangwanani musha makombiyuta uye hrs yedare nyere zvimwe mhando. Vakamira kunze mainframe kombiyuta nzvimbo vane makadhi aizivisa verenga "Rufu kuti kombiyuta!". Asi zvino Ukuwo, zvimwe haana bhuku rino vakasvika.
Pangava vanondiona somunhu rwokugadzira reactionaries. Kuti haisi nyaya zvachose. Chii ndinoda zvikuru somunhu ane achaenda skip madhaka cashless mugomba. Kuti aite izvi, mumwe anofanira kutanga kutora nhanho shomanana shure. Sezvo zvigadzirwa zvemazuva ano zvinogona kushandiswa zvizere nokuda zvakanaka zvinhu zvakare. Pakupedzisira, zvinogona kugumisa nyore kuti pasina michina yacho kombiyuta asingadi cashless nenzanga iri kwayo ano chimiro zvakakodzera.
Tiri vatengi vanobhadhara mari
Sei vakati Deputy Gavhuna Lars Nyberg sezvariri pane hurukuro pamusoro Financial Sector Union Congress muna Balsta muna 2008.
"Zviri nyore pakutanga pfungwa kudavira kuti pane zvokutengeserana uye pemahombekombe avo mari zvakanaka nokuda mari. Asi hakusi kuti nyore. Vashambadzi vanoda kuti avo mari akafukidzwa, zvikasadaro havagoni kuitisa basa ravo. Zvino chete anoenda kuti mabhanga. Naizvozvo, popping mutengo vachibhadhara zvose pakupedzisira kuti mucherechedzo pamusoro nhumbi uye mabasa isu kutenga. mukaka uye miriwo zvingava zvishoma zvinodhura chitoro uye dhipoziti prices vachitova kudzikisa mubhangi pane dai zvimwe kuva zvakadaro. saka ndiwo vatengi uye bhangi vatengi vari pakupedzisira kubhadhara mutengo vachibhadhara zvose asi hatina kuona kuvaitira Saka, tiri kuti vadavire kuti vari -... kana kuti mumwe munhu ari kubhadhara "
naizvozvo vakati, munhu mukati Riksbank, nokuti kamwe, chokwadi kupfeka. Kune vatengi uye vatengi avo mari kubhadhara. Ngatikurukurei kudzivisa nangananga pamusoro sei mari yakawanda kubhadhara mhosva kuna wezvokutengeserana uye mabhanga. The mabhanga iyo, sezvinei, paavhareji kuwana zvakawanda zana emadhora yakaisvonaka purofiti pagore Swedish. Zvisinei, unogona kutaura "murombo zvokutengeserana" kana haikwanise kuchengetesa takings zvavo zvezuva kubhengi. National Bank anoda vanhu vashandise mamwe makadhi chikwereti kuti sezvo zvisizvo achiti zvimwe "zvemari Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri". Nyberg aida ainzwisisawo ichi asi akaita kure chose nokutaura chokwadi.
At hurukuro pakati pezana 90 apo Stefan Ingves aiva mashoko mutevedzeri gavhuna wacho, anotevera.
"Nokuti mabhanga, uyewo nehoro ose siyana, vaishandisa pamusoro manotsi uye mari zvichikonzerwa småvärdestransaktioner zvikuru anodhura."
"Mune zvimwewo Mupfungwa, zviri chinodiwa kuti zvimwe kwema zvinoitiswa nekombiyuta kubva nokudaro ano inodhura mapepa-inobva kubudiswa zvinogona mberi kuderedzwa."
Ingves rokutanga mashoko Saka venhema zvachose. Hazvina vatengi uye kwete kubhangi, uye zvokutengeserana kuti pakupedzisira anotora mari kubhadhara. Chechipiri mashoko anopesana vanonzi "nokwawakarerekera" ari Riksbank wacho. Kuti Ndiko kudiwa vanhu kuti mari kuti kudzora vazhinji. It Vatsigiri ari Riksbank rakavhurika kontantlösheten.
Ichokwadi kuti sezvo asi pacharo anogona kusarudza kushandisa mari kana makadhi. Asi kana vanhu nguva kuputirwa ne mabhanga, nhau, hurumende masangano nevamwe tanga cashless Ipfungwa sezvo ine iri mupfungwa mupfungwa, akabvisa chikuru chikamu sarudzo. Zvinosuruvarisa vanhu vakawanda kudzivisa nangananga kana kana iwe vanonyengedzwa zvenhema zvakanaka goho. Nokuti vazhinji vedu zvinenge tide kuti kurwisa. Mari makadhi iri zvakavanzika kune huru kwazvo nemabhengi echikwereti makambani. Uyezve, chete nemabhengi kadhi makambani ane ziso pane zviri chaizvoizvo kuitika panguva kontantlösbrott.
zvikamu chikuru mari vaishandisa indasitiri kazhinji haana kongiri Nhamba kuratidza asi "ziva" asi kuti utariri ndiye "anodhura chaizvo". Masangano akasiyana uye vanhu vanotsutsumwa zvikuru kuti "mari yokugadzirisa nayo kunodyira zvikuru zvizhinji." Kungofanana nemashoko vachibhadhara chaiyo, ndiko isu vatengi uyo pakupedzisira zvakare kubhadhara mari zvakanaka. muridzi Business anotora kwete mari kubva zvake chikwama, somuenzaniso, muripo mu mari mukugadzirisa, Loomis. Pakutanga, mabhengi kuti dzakawanda mazai vachibhadhara vari kutengeserana asi kuguma ndiko mutengi anobhadhara. Zvino isu makasimbisa uyo pakupedzisira kubhadhara zvose kubhadhara uye mari zvakanaka. Saka ndiyo nguva yekupedza kugunun'una kugadzwa.
Nezvimwewo zvirevo zvizhinji zvakanyorwa chete kuti mari achaita mari bhizimisi. Hazvina musiyano chaiyo magariro mari, mabhizimisi yokufambisa uye munhu wacho mari. Zviri zvemasanga kutaura chero matatu akasiyana mari zvichienderana chii anoda anoparadzirwa. Chinhu chinofanira nguva dzose kushandisa ndiye pakupedzisira inobhadhara. Muchiitiko ichi vatengi.